baradhada sii kordheysa - majaladda "Nidaamka Baradhada"
Bogga guriga Calaamadda baradho koraya
Calaamadda: baradho koraya
Cuntadu mar walba way soo horraysaa
Aleksey Krasilnikov, Agaasimaha Fulinta ee Beerta Baradhada Ururka Baradhada waxay u badan tahay inay kordhiso xilli ciyaareedkan. Qiimaha wax soo saarka ayaa kor u kici doona iyada oo aan wax ...
Yaraynta xaddiga bacriminta inta lagu jiro codsiga ugu muhiimsan waxay ahayd natiijada dhaqaale ee ugu wanaagsan ee beeraha baradhada sannadkii hore. Tani waxaa daliil u ah...
Lyudmila Dulskaya Landing ayaa ku soo dhowaanaysa, beeraha - diyaargarow dagaal oo buuxa. Waa maxay niyadda ay beeralayda baradho la kulmaan xilliga? Ma ku guulaysatay...
Lyudmila Dulskaya Xagaagii hore waxaa lagu xasuustaa masiibooyinka cimilada: gobollo badan oo ka mid ah bartamaha Ruushka iyo Ural ayaa wajahay abaar. Krasnodar iyo ...
Agroholding "Dary Malinovki" bilaabay ololaha beeritaanka
Iyadoo imaatinka usbuuca ugu horeeya ee diiran, qabsashada beeraha ee Krasnoyarsk Dary Malinovki ayaa bilaabay ololaha abuurka. "Shaqada ayaa bilaabatay: Abriil 21, hektarkii ugu horreeyay ayaa la beeray ...
Dagestan wuxuu helaa waxsoosaar badan oo baradho ah
Jamhuuriyadda Dagestan, waxaa la isku dayayaa in la kordhiyo wax soo saarka dalagyada beeraha ee loo yaqaan "borscht set". Baradhada, kaabajka, karootada, basasha ...